Nacho Monreal oo ka warbixiyay xaqiiqda ah inuu jiro khilaaf u dhixeeya Emery iyo Ozil – Gool FM
Nacho Monreal oo ka warbixiyay xaqiiqda ah inuu jiro khilaaf u dhixeeya Emery iyo Ozil
(Arsenal) 06 Sebt 2018. Difaaca garabka bidix ee kooxda Arsenal Nacho Monreal ayaa beeniyay inuu jiro khilaaf ka dhexeeya Mesut Özil iyo macalinka Gunners ee Unai Emery.
Unai Emery ayaa ka saaray Mesut Özil shaxdiisa kulankii West Ham United ee horyaalka Premier League, taasoo albaabada u furtay warar ku aadan inuu jiro khilaaf u dhexeeya laacibka reer Germany iyo macalinka reer Spain.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Mesut Özil uu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda isagoo xanuunsan kulankii Cardiff ee Axadii lasoo dhaafay, laakiin waxaa wali jira cabsi ku aadan inuu ku haboon yahay qorshaha Unai Emery.
Laakiin Nacho Monreal ayaa wuxuu difaacay saaxiibkiis Mesut Özil, wuxuuna ku dooday inuusan jirin wax khilaaf ah ee kala dhexeeya tababare Unai Emery.
“Dadka waxay ahaayeen kuwo aaan daacad u ahayn isaga, waa ciyaaryahan caan ah, waana wax iska cad in dadka ay doonayaan inay xili kasta ka hadlaan, gaar ahaan xiliyadii dhawaa ee lasoo dhaafay”.
“Waxay isaga ka sheegeen waxyaabo aan wanaagsaneen, wuu xanuunsanaa, waana sababta uusan u ciyaarin”.
“Dadku waxay billaabeen inay soo rogaan in khilaaf uu kala dhexeeyo tababare Unai Emery, xaalada ma ahayn sidaas, waxaa haleelay hargab oo kaliya, wuu xanuunsanaa, waana intaas waxa jiray, taasi waa sababta uusan u ciyaarin”.